Boriborintany voalohany Mijaly amin’ny lalankely ny mponina…
Mijaly amin’ny lalankely ny ankamaroan’ireo mponina ao anatin’ny Boriborintany voalohany, indrindra fa ireo faritra iva.
Rehefa fotoam-pahavaratra izy ireo dia voatery mirobo-drano hatrany na mampiasa lakana mihitsy toy ny eny Ankasina, hany ka maro ireo lasibatry ny aretina, indrindra fa ny zaza amam-behivavy ankoatra ireo traboina. Manana olana goavana ihany koa ny mponina amin’ny resaka tsy fandriampahalemana. Noho ny tsy fisian’ny asa ho an’ny tanora mantsy dia marobe ireo lasa manaotao foana ka manendaka sy mangalatra etsy sy eroa, hany ka lasa faritra mena ny eny 67 ha sy ny manodidina. Mila olona tena vonona ny hitondra ny hetahetany marina, araka izany, ireo vahoakan’ny Boriborintany voalohany, antony nanosika an’Atoa Jacques Arinosy, nidina ifotony teny an-toerana, omaly.